Jery taratra… herinandro: miroso miandalana… azo antoka | NewsMada
Ny satan’ny mpanohitra sy ny fanoherana no tolo-dalàna dinihin’ny Antenimiera roa tonta amin’izao fivoriana tsy ara-potoana mandritra ny 12 andro izao raha ela. Eo koa ny fanoloran’ny praiminisitra ny Politika ankapoben’ny fanjakana (PGE). Ho an’ny Antenimierampirenena, hohatsaraina ny fitsipika anatiny.
Amin’ny 27 novambra ny fifidianana kaominaly, araka ny volavolan-tetiandron’ny Ceni. Andrasana hatramin’ny 27 aogositra ny hamoahan’ny fitondrana ny didim-panjakana fihaikana mpifidy handatsa-bato. Takin’ny Ceni mba ho ara-potoana ny tetibola sy ny fanontana ireo taratasy ilaina, ny fitandroana filaminana…
Namoaka ny didim-panjakana fihaikana mpifidy handatsa-bato amin’izay fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana mpanolotsain’ny Tanàna amin’ny 27 novambra izay ny governemanta. Voalaza fa andro tsy fiasana nefa andraisan-karama io, tsy misy fiovana ny kara-pifidianana, ny anto-bola harotsaky ny kandidà…
Nilaza ny minisitry ny Fitsarana tamin’ny fitokanana ny lapan’ny Fitsarana any Morombe, faritra Atsimo Andrefana, fa tsy hananany antra ny mpitsara manao kolikoly. Tsy andeferany koa ny mpitantam-bolam-panjakana amin’izany. Sarotra ny hahazoana fahafahana amin’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac).
Nanolotra ny fandaharanasa, araka ny Velirano miisa 13, ho fanatanterahana ny politika ankapoben’ny fanjakana (PGE) teny amin’ny Antenimierampirenena ny praiminisitra. Lohahevitra dimy no novelabelariny: ny lafiny fitantanana, ny fandriampahalemana sy ny filaminana, ny toekarena, ny tontolo iainana, ny sosialy.
Eo amin’ny fiainam-bahoaka: haverina amin’ny teo aloha ny tetiandrom-pampianarana. Tsy mbola voafaritra izay ho fidiran’ny mpianatra, taona 2019-2020. Eo koa ny fiatrehana ny valanaretina pesta. Nanomboka tamin’ny fanomezana ombivavy beronono tany Vinaninkarena, Antsirabe, ny tetikasa fihariana.
Firosoana miandalana amin’ny asa fampandrosoana ny fiainam-bahoaka sy ny firenena avokoa izany rehetra izany? Miandalana fa azo antoka…